"Mumakomo ekupenga." Zvinotyisa zveCosmic kubva paruoko rweLovecraft. | Zvazvino Zvinyorwa
M. Scabies | | Zvinotyisa
Oiri naNicholas Roerich, mumwe wevakawanda vakafemera Mumakomo ekupenga.
Zvinoshamisika kuti munyori wehunhu hwe HP Lovecraft akafa ega uye ari murombo, kunyangwe muchokwadi iri mutambo wakajairika kupfuura zvaungaratidzika. Hapana munhu muprofita munyika yake kana, sezvazviri, munguva yake. Kunyangwe zvakataurwa naLovecraft muhupenyu kuti "muchinda haaedze kuzviita anozivikanwa, anozvisiyira kune vane hunyanzvi vanoita basa uye nevadiki," zviri pachena kuti ainyengera. Maitiro ayo akaomarara emufambiro (kana kushuvira zvishuwo, sekureva kwevamwe vanyori vezvinyorwa zveupenyu) zvakazvidzivirira kubva pakubudirira mukutengesa. Nepo kukudzwa kwake, izwi ratove chinyakare kunyangwe pakutanga kwezana ramakumi maviri, rakakodzera kurumbidzwa. "Mumashoko emunyori wechiFrench Michel Houellebecq:" Munguva yekushambadzira kwakapenga, zvinonyaradza kuwana mumwe munhu anoramba 'kuzvitengesa'.
Izvo kunyangwe ivo vatsoropodzi veProvidence munyori (pakati pavo watingatumidze zita Ursula K. Le Guin) vanofanira kubvuma ndizvo izvo zvakakurudzira hunyanzvi yezvizvarwa zvinotevera. Ngano dzake dzakapfuura pulp y pachivande nzira yese yekuwanda kwetsika. Nhasi vazhinji veruzhinji vanoziva, zvirinani nerunyerekupe, Cthulhu zvakanyanya seBatman kana Frodo. Iwo matende enhoroondo yaLovecraft anowedzera mumabasa akaparadzaniswa seye firimu Mutorwa: iye wechisere mufambi naRidley Scott (1979), inoonekwa inoonekwa Anoshamisa Mazuva Ose: Kusavapo Kuvapo ne SCA-JI (2010) kana rwiyo rasika in Ice yeboka reRage (1993), iro rinoongorora zviitiko zveino pfupi pfupi Mumakomo ekupenga. Ndiro basa chairo ratiri kuzokurukura.
Iyo nharaunda yakandiyeuchidza zvishoma nezvezvisingazivikanwe uye zvinovhiringidza pendi dzeAsia naNicholas Roerich, uye nerinonyanya kushamisa uye rinokanganisa tsananguro yenzvimbo yakaipa uye yakanakisa yemupata weLeng iyo inoonekwa mune inotyisa 'Necronomicon', neakapenga Arab Abdul Alhazred. Gare gare ndakasuruvara zvikuru nekuverenga bhuku rinotyisa iri muraibhurari yeyunivhesiti.
Lovecraft akatambura nenyaya isingawanzo poikilothermia (kutadza kudzora tembiricha yemuviri pasina tembiricha iri mukati), izvo zvakamuita kuti anzwe kurwara chaizvo patembiricha iri pazasi pe20º, kunyanya kusvika kumagumo ehupenyu hwake. Nechikonzero ichi, zvinonyanya kukatyamadza kuti imwe yenyaya dzake dzakanakisa yakaiswa muAntarctica, sekunge kondinendi iyoyo yakasiiwa neruoko rwaMwari yainge yakonzera kushamisika kwakanyanya.
Kavha yechinyorwa cheCátedra de Mumakomo ekupenga.
Iyo nharo ye Mumakomo ekupenga iri nyore musimboti: iyo geologist William dyer inotaurira mumunhu wekutanga rwendo rwake neboka remasayendisiti kuAntarctica, uye zvinotyisa zvisingataurike zvavanoona muguta, rakarasika muchando, izvo zvaisafanira kuvepo. Iyo inoverengeka yakanyatso kufuridzirwa ne Arthur Gordon Pym Rondedzerorakanyorwa naEdgar Allan Poe. Iko hakuna kana imwe hurukuro pakati pemapeji ayo, pamwe nekuda kwesarudzo yekushongedza, kana nekuti iye munyori chaiye aiziva nezve kutadza kwake kunyora nhaurirano dzechokwadi (sekutaura kunoita Stephen King murondedzero yake. Ndichiri kunyora). Chero zvazvingaitika, Lovecraft anoshandisa vanhu semapoto chete kutaurira nyaya yakura kwazvo, uye inotyisa kupfuura vanhu pachayo.
Ropa rake rinopfuura nemumatsinga angu
Iwo mapapiro, zvakadaro, akaramba achiratidza mamiriro ayo emuchadenga. […] Zvaive zvisinga fungidzike zvekuti ndakashamisa kuyeuchidza Nyanza nezve ngano pamusoro peVakuru vekare vakaburuka kubva kune nyeredzi uye vakagadzira hupenyu hwepasirese nekuseka kana kukanganisa, uye nyaya dzesango pamusoro pezvisikwa zvepanyika kubva Kunze vaigara mumakomo, kubva iyo inotaurwa nemumwe shamwari folklorist kubva kuMiskatonic Dhipatimendi reChirungu Zvinyorwa.
Iri bhuku haisi ngano inotyisa, muchimiro cheiyo Gothic tsika yezvipoko nemampires, asi nyaya ye cosmic kutyisa inoongorora kusakosha kwedu isu tiri pakati pezvakakura zvakasikwa. Zvinotyisa zve Mumakomo ekupenga iko kutaridzika kwayo semushumo wakasarudzika wesainzi ("iyo glacier yaive pa 86º 7" latitude uye 174º 23 "kumabvazuva longitude" kana "iyo piramidhi yaive 15 m kukwirira ne 5 m kureba"). Senge kuti zvakaitika chaizvo. Zvinotoshamisa kuti kushandisa kwakarongeka kwaLovecraft kwemazwi ehunyanzvi kunowana hunyanzvi hwekudetemba.
Achifambira zvakadzama muzvinyorwa zvine mutsindo, munyori anoshandisa zvese zvinonzwisiswa semhosho dzevatanga (kuwanda kwezvipikisheni nezvipikisheni, mashandisirwo ezvinyorwa zvekare kana zvakabatwa zvakanyanya, nezvimwewo), zvaanozvigadzira uye achibhururuka kunge chikwangwani. Izvi zvinoita kuti iwo mavara ave ne hunhu hwekuparadzanisa zvakakwana, kupfuura tsananguro. ZveRudocraft, tembere hadzisi Grandes, kana hombe, kana zvisiri cyclopean y megalithic. Izvo zvinoshandura kuita mhando yeanachrony uye isiri yechokwadi iyo inokanganisa mamiriro emuverengi sezvo nyaya ichifambira mberi.
Unogona kutaura kwenguva refu nezve Mumakomo ekupenga, asi zvinokwana kutaura kuti ibwe repakona reXNUMXth century sci-fi uye rinotyisa mabhuku. Zvizhinji zvezvatinoverenga nhasi zvine chikwereti chakakura kunoverengeka iyi. Pamwe, munguva pfupi iri kutevera ichave iri pamiromo yeveruzhinji, sezvo director anozivikanwa Guillermo del Toro (akahwina ma Oscars akati wandei Chimiro chemvuraanga achidanana nepfungwa yeiyo firimu vhezheni kwemakore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Zvinotyisa » "Mumakomo ekupenga." Zvinotyisa zveCosmic kubva paruoko rweLovecraft.